Ngathi | Ningbo Golden Classic Izibane Co., Ltd.
Ningbo Golden Classic Izibane Co., Ltd. Umenzi wobuchwephesha kwizibane zangaphandle ze-LED kunye nezibane zokukhanyisa.Sizinikele kwimizi-mveliso yokukhanyisa ngaphezulu kweminyaka eli-15.
Ukuveliswa kwemveliso kubandakanya ukukhanya kwesitalato, izibane zikaMkhukula, ukukhanya kwelanga, izibane zegadi, iHighbay, izibane zeLawn kunye nezibane zokukhanyisa. Wamkelekile OEM kunye neeprojekthi ODM.
Zonke iimveliso ezithunyelwa ngaphandle kwiimarike zaphesheya, kubandakanya iYurophu, iMelika, mpuma Asia kunye nasempuma Mpuma. Inkampani ine-CE, izatifikethi zeRohs. Iqela leQC elinamandla lisebenza nzima kwimigca yeemveliso ngokwe-SO9001-2015 yolawulo lomgangatho. Umgangatho uzinzile kwaye ulunge kakhulu.
Ukukhanya kweGolden Classic kunezixhobo ze-15000 m², abantu abayi-150 kubandakanya iinjineli ezi-6 Sigcina ukuphuhlisa iimveliso ezininzi ezitsha minyaka le.
Izixhobo eziphambili ziqulethe i-1000t, 700t, 300t oomatshini bokuphosa abafayo, oomatshini be-3 CNC, oomatshini bokufaka i-LED kunye ne-welding, i-Auto Powder yokugcoba umgca, imigca emi-3 yokuhlanganisa kunye nemigca emibini yokuguga. Amandla emveliso 500,000 iiPC izibane nezibonda ngonyaka.
Ngaphandle koko, ilebhu entsha inamandla ovavanyo lwe-IES, uvavanyo lwe-IP, uvavanyo lwe-IK, uvavanyo lobushushu olusebenzayo kunye nokuvavanywa kweLumen.
Isilogeni sethu sivelisa iimveliso ezisemgangathweni ophezulu kwihlabathi.Sijonge ubudlelwane bezeshishini kunye nabathengi abanomgangatho olungileyo kunye nexabiso elifanelekileyo.
Singumenzi wezibane zangaphandle.
Injongo yethu kukubonelela ngezisombululo zesiko kubathengi nakwiimarike.
Nangona iimarike, usetyenziso, kunye nabathengi zahlukile, iJindian inoluvo olukhethekileyo lokukhokela abathengi ukuba baphumelele.
Ngalo naluphi na udliwanondlebe kunye nengxelo, siya kuphendula ngomonde nangocoselelo.
Ngayo nayiphi na imibuzo, siya kunika iikowuteshini ezifanelekileyo ngokukhawuleza.
Ngayo nayiphi na imveliso entsha, siya kunxibelelana nabathengi kwaye sithathe izimvo zabo siqwalasele ukwenza eyona mveliso ibalaseleyo.
Kuwo nawuphi na umyalelo, siya kugqiba imveliso ngexesha.
Siza kuchitha ixesha kunye namandla okusombulula zonke iingxaki, nokuba zixhaphake kangakanani na. Siya kuhlala sikulungiselela, kwaye ungafumanisa ukuba singathetha ulwimi lwakho kwaye siyayazi itekhnoloji yakho. Kungenxa yoko le nto sisebenzisane ngempumelelo nabathengi abaninzi abavela kumazwe ahlukeneyo.
Isiseko segolide segolide kumcimbi weshishini "umgangatho ophakamileyo, ukuchaneka okuphezulu, isiphene zero", nikela ingqalelo kumgangatho, ukwakha ishishini elikhuphisanayo. Sihlala kwisitayile somsebenzi "sobambiswano kunye nentembeko, ungaze unikezele, umsebenzi weqela, qhubeka uphucula", wamkela ngokunyanisekileyo abathengi abatsha nabadala.
Ulwenziwo Sineqela le-R & D elomeleleyo, kwaye sinokuphuhlisa kwaye sivelise iimveliso ngokwemizobo okanye iisampulu abathengi abazinikelayo.
Ixabiso:Sinezinto zethu zokulahla iziseko, umzi mveliso we-CNC kunye nomzi mveliso wepali. Ke sinokunikela ngexabiso elifanelekileyo kunye neemveliso ezilungileyo ngokuthe ngqo.
Umgangatho: Sinelebhu yethu yokuvavanya kunye nezixhobo zovavanyo eziphambili kakhulu nezigqibeleleyo, ezinokuqinisekisa umgangatho weemveliso.
Ubungakanani:Imveliso yethu yonyaka ingaphezulu kwe-1,000,000 iseti. , sinokuhlangabezana neemfuno zabathengi abohlukeneyo ngobungakanani bokuthenga obahlukileyo.
Imveliso: Sijolise ekuphuhliseni iimveliso ezikumgangatho ophezulu kwiimveliso zentengiso ephezulu. Iimveliso zethu ziyahambelana nemigangatho yamazwe aphesheya, kwaye ikakhulu zithunyelwa eYurophu, eMelika, eJapan nakwezinye iindawo ehlabathini jikelele.
Inkonzo:Umthengi uhlala eyokuqala. Kungumsebenzi wethu ukubonelela ngeenkonzo ezilungileyo kubo bonke abathengi, nokuba ngubani umthengi omkhulu okanye omncinci.
Zokuthunyelwa: Sikumgama oziikhilomitha ezingama-35 ukusuka kwiZibuko laseNingbo, kulunge kakhulu kwaye kuyasebenza ukuthumela izinto kwamanye amazwe.